Dawlada Somaliya oo looga digey inay soo celiso Somalida Shiinaha ku nool - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada Somaliya ayaa loogu baaqay inayna soo qaadin Somalida Ku nool gobolka Shiinaha ee iskood u tagey haddana uu ku haleelay cudurka Hargabka Shiinaha. Dawlado badan ayaa diidey inay soo qaadaan dadkooda jooga gobolka uu Ka dilaacay cudurku.
Cudurkan hargabka Shiinaha ayaa hadda Ku faafay ilaa 30 dal haba kala badnaadaane. Waxana jira dalal iyagu is biirsaday oo dadkooda Ka soo qaadaya Shiinaha.
“Diinteena waxay qabtaa in aan laga cararin goobta masiibadu ka dhacdo loona safrin inta arintu kala hagaagayso. Ardeydan ku nool Shiinaha ayaa dalbanaya in laga soo daadgureeyo halkaas taas oo la fahmi Karo laakiin waxa Ka weyn halista ay gelin karaan shacbiga kale ayuu qabaa Cali Calasow.
Somalida Yaman ku nool looma gurman waxayna ku noolyihiin kufsi joogta ah iyo halista ah in wahaabiyada Sucuudigu duqeymo Ku dilaan, ayaga haloo gurmado ayuu raaciyay Cali Calasow.
“Xilli wax la daadgureeyo ma joogno, dawlada aan kharashka badan haynin waxaan oran lahaa dadka sidooda kale u liita yaan la dul keenin cudur si xun u faafa oo aan awood loo haynin ayay tiri Fardowsa Macalin oo wax ka barata Muqdisho
Warbixintii C/llaahi Warmooge